Kambani Inofanirwa Kupinda Rini muSocial Media? | Martech Zone
Kambani Inofanirwa Kupinda Rini muSocial Media?
Muvhuro, Nyamavhuvhu 18, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Zvizhinji zvekukurukurirana kwedu mu Corporate Blogging BlogINDIANA chikamu chaive apo kambani inofanirwa kupinda mukati mezvenhau, sei vanofanirwa kudhiraivha pasocial media, uye nemabatiro avanofanira kuita tarisa mukurumbira wavo online. Nezvedu nhasi, ini ndiri kuzotora iwo mubvunzo apo.
Vazhinji vanhu vachati, nhasi! Zvino! Nezuro! Ini handidaro. Ini ndinokurudzira kuti zvemagariro midhiya uye mabloggi haisi nzira yekutengesa, iwo mazano emakambani. Hakusi kungozviisa iwe pachako pamusika ku svetukira pane yechizvino bandwagon uye vatengi vachamhanyira kwauri. Zvemagariro midhiya zvinotora nguva, zano uye zviwanikwa zvakanaka (zvese zvishandiso nevanhu).
Mufananidzo kubva AllPosters.
Zvemagariro Midhiya zvinoda mwero wekujekesa uye wechokwadi izvo makambani mazhinji asiri kugadzikana nazvo. Makambani haapinduri chete kune vatengi - ivo vanopindura kumakwikwi, indasitiri, vagovani, vashandi uye tarisiro. Mune mamwe mazwi, pasocial media inogona uye inokanganisa dhipatimendi rega mukambani yako nevashandi pamatanho ese. Unofanira kunge wakagadzirira.
Kana iwe uchifunga kuti uchazobudirira nekukanda kumusoro WordPress blog, iwe wakanganisa. Iwe unoisa panjodzi yekunosediving mune inonyadzisa kuvepo pamhepo kuti iwe uchave neyakaoma nguva yekuchera kunze kwekuti iwe usati wanyudza zvigunwe zvako zvachose. Bvunza kune wezvemagariro midhiya nyanzvi iyo inonzwisisa zvakasiyana siyana zvishandiso zviri pamusika uye kuti iwe ungabatsirike sei kubva kune yega kana kubva kune mubatanidzwa wevose.
Iwe unofanirwa kusanganisira vese vatungamiriri mukambani yako - avo pachake zano rekambani. Kana iwe usina zvese kunzwisisa uye kutenga-mukati kubva kumusoro kweketani, kuenderana kuburikidza neimwe nzira yematanho kunopera. Kuisa Kushambadzira mukutarisira yako yemagariro midhiya zano iri kuendesa makiyi eboardboard kwavari - vangangotadza kuona kukanganisa kwekutengesa, rutsigiro rwevatengi, kugutsikana kwevatengi, kugutsikana kwemugovani, nezvimwe.
Ndinozvitaura zvakare, njodzi yebhizinesi inopinda munharaunda yemagariro venhau uye ikakundikana yakaipa kupfuura kusatombopinda zvachose.
Izvi zvinoreva here kuti kambani haifanire kunyura mune vezvenhau?
Kwete… asi ndinotenda ichi ndicho chikonzero pave paine kunonoka kugamuchirwa epamhepo pacts uye zvibvumirano senge Kambani Mutengi Chibvumirano. Vanyori vechibvumirano ichi vanonzwisisa here kuti mamwe makambani haakwanise kusaina chibvumirano chakadai?
Zvinotyisa uye zvinondifungisa vazhinji vezvematongerwo enyika vari munzira izvozvi - vari kuvimbisa zvese pasi pezuva vane zviwanikwa zvishoma zvekununura chaizvo. Ichokwadi ndechekuti mazhinji emakambani anogona kutadza kubhadhara chibvumirano chakadai! Ini pachangu, ndaizoda kambani yangu kusaina chibvumirano - asi ndinoziva kuti vagovani uye hutungamiriri vaizozvidza.
Kambani yangu haina kana kuisa kuisa kuburitswa papasi-kutyora maficha nekutya kukwikwidza kuriibvuta. Maharaini edu akasungwa, vatengi vedu vakachipa, uye makwikwi acho anotyisa. Kunonoka kuve opaque inogona kutipa nemupendero watinoda kubata unotevera mutengi mukuru makwikwi asati aitika. Disiki: Ini handitenge zvakazara mune ino zano asi ini ndinoremekedza ruzivo rwebhodhi rinotungamira kambani yedu. Mushure mezvose, imari yavo yatiri kubheja nayo.
Kune rimwe divi, iyo njodzi yekusa dhibhaiza pasocial media ndeyekuti makwikwi ako kana dzako kusagutsikana vatengi (kana zvakaipisisa… vashandi) ndicha! Kune mienzaniso yakanakisa yemakambani avo zvakavhiringidza kurwisa kwekutsoropodza by vachibvisa nguo dzavo dzekuvanzika uye kusvetukira kunze mukurwa.
Pakupedzisira, ndinotenda (ndinovimba) makambani ese achasundidzirwa mukuzvibatanidza pamwe nezvibvumirano zvakaita seKambani Mutengi Chibvumirano. Ini ndinongoziva izvozvo kumakambani mazhinji, izvo hazvisi nhasi.
Enderera kuChikamu 2 che3!
Tags: yemagariro venhaubhizinesi rezvenhauevanhu vezvenhau
Aug 20, 2008 pa 9: 49 AM
100% inobvumirana kusvika pakubatana kwakakura kutenga, kunyanya zvakadaro pamatanho epamusoro, uye zvakafanana nemutengo wekutadza. Zvinotora toni yemubhadharo wePR kugadzirisa iyo yakundikana hafu yakabikwa kupinda mumasocial media, uye kana nyaya dzekugadzirisa dzakakonzera dzakadai dzisina kugadziriswa, zvinongodzokorora mune imwe nzira pasi pemugwagwa. Kune rimwe divi, kutora kwakadai kutenga mukati, kwechimwe chinhu chine mutengo wakaderera wekupinda, uye zvichikonzera kuoneka kwakaderera kwemakambani kungangove kwakaoma zvikuru. Izvo zvinongoratidzika pa radar, uye nepo kuenda kumberi kungaitika, hausi moyo nepfungwa paradigm inoshanduka nechero nzira. Zvirinani hazvingadaro, kusvikira chimwe chinhu chakanakisa, kana chimwe chinhu chakaipa chikaitika.
Sekuenda kune chibvumirano chekambani yevatengi chinoenda… magweta angave aine zuva remunda neizvozvo. Iwe unogona here kufungidzira foni co, kambani yeinishuwarenzi, yepamusoro tech co, kana kunyangwe wepakati saizi mugadziri achibvumirana neaya mazwi, achifunga kuti vanonzwisisa mabhenefiti eakadai, uye kwete kungonzwa chete mhando yakanaka yechinhu yekuita? Iyo ine yakawanda yakawanda yakanaka mukana mune dzidziso… asi ikatorwa sezvazviri, taura nezvezvakawanda kune gweta vamhan'ari, wemukwikwidzi, zvese zvehurongwa info, asi zvakare kuunganidza, uye kunyangwe vatori vese.
Chibvumirano chekambani yevatengi hachisi chinhu chakashata hazvo, asi mhedzisiro isingatarisirwe yakakosha, kunze kwekunge ichingova muromo chete chinhu chechinhu.